Models bolero amin'ny akanjo hariva
Ny modely samihafa boleros dia ahafahanao manao ny akanjo hariva manokana - mampisehoa prestige (raha modely ho an'ny hoditra), endrika amam-pihetseham-po (raha mahitsika sy mivelatra), na manao sary mahafinaritra (raha toa ka vita amin'ny loko mamirapiratra ny modely).
Fitsipika momba ny fisotroan - doko bolero iray amin'ny akanjo hariva
Mila mifidy bolero ianao, raha jerena ny lokon'ny akanjo sy ny toetoetran'ilay hetsika. Ohatra, amin'ny fombafomba ofisialy, tsara kokoa ny misafidy ny laconic, modely tsotra tsy misy pentina lava lava. Amin'ny namana iray. Ny antoko tsy ara-dalàna dia afaka manampy mamirapiratra ary misafidy bolero mamakivaky amin'ny vato rongony.
Ilaina, fa tsy ilaina, ny bolero dia mamerina ny loko amin'ny akanjo - ny fahasamihafana amin'ny feo maro dia tsy ho hita loatra, fa ny hatsikana dia tsy hitovy amin'ny fitafy, ny mpanamboatra izay tsy afaka manonofinofy sy manaloka antsipirihany samihafa.
Ankoatra ny fizarana ny bolero amin'ny fomba - amin'ny lavaka lava sy lava, miaraka amin'ny fifandraisana ary tsy misy azy, ny bolero dia azo sokajiana araka ny material.
Modely Bolongana Bolero
Ny akanjo bolero amin'ny akanjo hariva dia mitongilana, tsotra ary mahaliana ihany koa. Ny modely vita amin'ny akanjo lava lava dia manintona kokoa noho ny amin'ny fohy - raha ny marina, ny bolero dia ampahany famantarana ny soroka, indrindra raha ny lozika dia miteraka lozaka lehibe izay tsy hafana raha ilaina.
Bolero modely avy amin'ny lamba
Ny tissue bolero dia hanampy amin'ny fananganana fombafomba fombafomba ho an'ny hetsika fombafomba, satria izy ireo dia tsy toy ny tsy ara-dalàna, toy ny akanjo maingoka na hoditra. Saingy amin'ny fotoana iray ihany, ny lamba mamirapiratra mamirapiratra dia hameno ny akanjo fitondra amin'ny akanjo ho an'ny fety ao anatin'ny faritry ny namana.
Fur boleros dia manantitrantitra ny toeran'ny vehivavy, ary noho izany dia antsoina izy ireo ho fankalazana izay tena ilaina ny fanehoan-kevitra ny hoditra voajanahary na artifisialy. Matetika ny fotsy fotsy bolero dia ampiasaina amin'ny akanjo ampakarina, ny fampakaram-bady izay mitranga amin'ny hatsiaka - amin'ny ririnina na amin'ny fararano.
Dress Summer in Chiffon
T-shirt misy pastèque
Jacket ao anaty tranom-borona - ireo modely modely sy ny fomba fitafy?
Ahoana no hisafidianana akanjo amin'ny fararano?
Fambolena nofafazana - fambolena sy fiahiana
Nymphaea ao amin'ny aquarium
Ny rivomahery miverimberina - inona no atahoran'ny bibikely?
Mamy siramamy mamy miaraka amin'ny crème
Hepatita - karazany, fomba fiasa, fitsaboana, fisorohana
Fanamboaran-javatra avy amin'ny tsora-kazo avy amin'ny gilasy
Sakafo miaraka amin'ny akoho amin'ny antsipiriany
Sakam-panorenana - ahoana no fomba hanaovana safidy tsara?
Ny Breg ny vehivavy - lamaody lamaody amin'ny fizaran-taona farany
Brexit: ny fihetsiky ny kintana sy ny sariitatra maneso eo amin'ny Queen Elizabeth II
Nahoana no manja be ilay zaza?
Gymnastics taorian'ny sezareana
Lahatsoratra iray momba ny "Lohataona" ho an'ny ankizy madinika
Fanipika vita amin'ny vy